Bubata nhazi site na Excel na QGIS ma mepụta Polygons - Geofumed
Febụwarị, 2016 Geospatial - GIS, qgis
Otu n'ime ihe ndị a na-emekarị na ojiji nke Geographic Information Systems bụ iwu nke mbara ala sitere na ozi sitere n'ọhịa. Ma nke a na - anọchite anya nhazi, ngwugwu ngwugwu, ma ọ bụ grid dị elu, ozi a na - abatakarị na faịlụ dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ na Excel.
1. Njikọ nhazi ihu ala na Excel.
N'okwu a, ana m agbalị ịbubata ebe obibi mmadụ nke Republic of Cuba, nke m weputara diva-gis, nke site n'ụzọ bụ otu n'ime saịtị kachasị mma iji budata data ala site na mba ọ bụla. Dịka ị pụrụ ịhụ, ogidi B na C nwere ozi gbasara ohere na lonjituudu n'ụdị nhazi obodo.
2. Mbubata faịlụ ahụ na QGIS
Iji bubata nhazi nke faịlụ Excel, a na-eme ya:
Vector> XY ngwaọrụ> OpenExcele faịlụ dị ka isiokwu table ma ọ bụ Point oyi akwa
Ọ bụrụ na echekwara faịlụ ahụ na ndọtị .xlsx, ihe nchọgharị ahụ agaghị egosi ya, ebe ọ na-ehichapụ faịlụ naanị na ndọtị .xls. Ọ bụghị nsogbu, anyị nwere ike itinye usoro DOS ochie wee dee aha mgbanwe, nzacha: *. * (akara mmuke akara mmuke akara mmuke) na anyị na-abanye; nke a ga - enye ohere ka a hụ faịlị niile nọ ebe ahụ. Anyị nwere ike dee * .xls ọ ga - ehichapụ naanị faịlụ na ndọtị .xls.
Mgbe ahụ, anyị nwere otu panel nke anyị ga - egosi na kọlụm dị nhazi na X, na nke a, anyị na - ahọrọ kọlụm nke ogologo, kọlụm nke ohere maka nhazi Y.
Ma n'ebe ahụ ka anyị nwere ya. Ajuju ajuju ajuju ajuju ajuju ajuju ajuju ajujujujua nke nke di na faịlụ ndi mmadu Cuban, nke gunyere aha, latitude, longitude, nhazi na ochichi.
3. Mepụta polygons site na nhazi
N'ọnọdụ, anyị chọrọ ọ bụghị naanị ịbubata ogwe osisi kamakwa ịmepụta polygon n'usoro nke nhazi ndị a, anyị nwere ike iji ngwa mgbakwunye Points2One. Ihe mgbakwunye a na - enyere gị aka ịchọpụta otu a ga - esi kpọọ oyi akwa ebe a na - aga, ọ bụrụ na ihe anyị ga - ebubata ga - ewu dị ka ahịrị ma ọ bụ polygon.
4. Esi esi bubata nhazi site na Excel gaa na ihe omume CAD / GIS ndị ọzọ.
Dị ka ị nwere ike icheta, anyị emeela usoro a na ọtụtụ mmemme ndị ọzọ. Dị mfe dị ka QGIS, ole na ole. Mana lee otu esi eme ya AutoCAD, Microstation, manifold GIS, AutoCAD Civil 3D, Google Earth.
Previous Post«Previous Master in Urban Design and Planning [UJCV]
Next Post 1 akwukwo: Congress TOPCART 2016Next »